6 tillaabo oo kaa caawinaya inaad lacag ka samayso hiwaayaddaada
1. Faham waxa aad ku fiican tahay
Waxaad lacag ka samayn kartaa ku dhawaad ​​hiwaayad kasta. Haddii aad jeceshahay farsamada gacanta, isku day inaad tolida ama tolidda dharka. Oo haddii aad jeceshahay warbaahinta bulshada, qaado SMM. Waxaad sawiri kartaa sawiro, sawiri kartaa sawiro la sameeyay, qalabka dayactirka, ama waxaad dubi kartaa keega. Isku day inaad fahanto waxa kugu soo jiidanaya iyo waxa xiisayn doona macaamiisha iman kara; isgoyskan, waxaa laga yaabaa in fikrad ay ka soo baxdo lacag.
Ku celceli maalin kasta si aad u hesho waayo-aragnimada aad rabto oo arag haddii aad diyaar u tahay inaad hiwaayaddaada u beddesho shaqadaada nolosha. Si ka duwan hiwaayadda, socodka shaqadu way adagtahay in lagu dhiso dhiirigelinta imanaysa marba wakhti. Dhaqan maalmeedka ayaa kaa caawin doona inaad dib u barato doorkaaga cusub.
2. Soo hel qiimaha alaabta
Hawshaadu waa inaad fahanto sababta soo jeedintaadu uga fiicnaan doonto ugana xiiso badan tahay kuwa kale ee la midka ah. Si tan loo sameeyo, baro tartamayaashaada. Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad doonaysaa inaad dubto keegaga la sameeyey. Waxaad ku nuuxnuuxsan kartaa inaad isticmaasho maaddooyinka dabiiciga ah oo keliya, bixi dhawr buuxin oo aad ka dooran karto, ama aad abuurto naqshad shakhsi ah. Waxaad ku dubi kartaa keega vegan ama keega bento yar oo leh qoraallo qosol leh. Dalabkaagu waa inuu u dhawaaqaa si ay macaamiishu isla markiiba u jeclaan lahaayeen inay dalbadaan.
Ka fakar sida kale oo aad ugu dhiirigelin lahayd macaamiisha inay wax iibsadaan. Tusaale ahaan, waxaad si qurux badan u baakayn kartaa alaabta. Khibrada iibsashada bac balaastiig ah iyo warqad farshaxan ayaa noqon doonta mid aad u kala duwan, iyada oo aan lacag badan ku bixin qurxinta. Macaamiisha joogtada ah waxaa lagu siin karaa qiimo dhimis ama gunooyin wacan.
3. Samee qorshe ganacsi
Waxay kaa caawin doontaa inaad go'aamiso yoolalkaaga, siyaabaha aad ku gaari karto oo aad fahamto inta aad kasban karto. Qorshaha ganacsigu waa inuu ka kooban yahay:
Sharaxaada fikradda.Si kooban noogu sheeg badeecada ama adeega aad bixin doonto, maxay yihiin sifooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iidooyinka uu macmiilku ka helayo iibka.
Dhageystayaasha la beegsanayo.Xitaa haddii ay kuugu muuqato in alaabtaada loogu talagalay dhageystayaasha ugu badan ee suurtogalka ah, isku day inaad si gaar ah u qeexdo. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dhar tosho, aragti ahaan, dhagaystayaasha bartilmaameedka ah waa mid aan xadidnayn. Laakiin dhab ahaantii, macaamiishaada ugu weyn waxaa laga yaabaa inay yihiin dad da'doodu u dhaxayso 30 iyo 50s oo dakhligoodu ka sarreeyo oo aan jeclayn inay dharka ka iibsadaan suuqa guud. Ogaanshaha tan, waxaad awoodi doontaa inaad si sax ah u diyaariso soo jeedintaada oo aad u xayeysiiso si wax ku ool ah.
Falanqaynta tartanka.Waxay kaa caawin doontaa inaad heshid goobtaada warshadaha, iska ilaali inaad sameyso khaladaad ay tartamayaashu horey u sameeyeen, oo ka dhigi alaabtaada mid wanaagsan.
Hababka xayeysiinta alaabta.Sharax xeeladaha gaarka ah ee aad raacayso. Tusaale ahaan, waxaad ku xayeysiin kartaa badeecad baraha bulshada, waxaad dejin kartaa xayeysiis la beegsaday, ama waxaad ka iibsan kartaa xayeysiisyada bloggers. Ka taxadar ma aha oo kaliya sida aad u soo jiidan doonto macaamiisha cusub, laakiin sidoo kale ku saabsan sida loo ilaaliyo kuwa caadiga ah. Tusaale ahaan, waxaad ka fikiri kartaa nidaamka gunnooyinka iyo qiimo dhimista.
Qorshe maaliyadeed.Waxay kaa caawinaysaa in la qiyaaso inta lacag ee loo baahan yahay si loo bilaabo ganacsi iyo kharashyada loo baahan doono marxaladaha soo socda. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad iibsato qalab iyo agab cusub ama aad maalgeliso xayeysiinta warbaahinta bulshada. Tixgeli kharashyada go'an (canshuurta, khidmadaha kirada). Ha iloobin inaad muujiso dakhliga aad qorsheyneyso inaad ka hesho ganacsiga.
4. Isku diwaangeli sidii qof iskii u shaqeysta
Iskaa u shaqeyste waa qofka bixiya canshuurta Sharciga Federaalka ee Tijaabinta si loo Sameeyo Canshuurta Dakhliga Xirfadlaha ee Nidaamka Canshuuraha Gaarka ah ee ku taariikhaysan Noofambar 27, 2018 N 422-FZ (daabacaadda ugu dambeysa)
4% haddii lacagta laga helay shaqsi;
6% haddii adeegyada ay bixiyaan hay'ad sharci ah ama ganacsade gaar ah.
Qofka iskii u shaqeysta uma baahna inuu bixiyo canshuurta dakhliga. Xaaladdu waxay ku habboon tahay dadka leh ganacsigooda, ma jiraan shaqaale, iyo qaddarka dakhliga sannadkii ma dhaafo 2.4 milyan rubles. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho dakhli la xaqiijiyay oo aadan ka baqin ganaaxyada dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee sharci darrada ah. Dadka iskood u shaqeysta waxay heli karaan tallaabooyinka taageerada dowladda: tusaale ahaan, waxaad heli kartaa qiimo dhimis ku kiraynta boosaska goobta shaqada ama waxaad kala tashataa xisaabinta iyo canshuuraha xarumaha taageerada ganacsi ee My Business.
Si aad isaga diiwaan geliso sidii qof iskii u shaqeysta, uma baahnid inaad meelna aado, kaliya waxaad u baahan tahay inaad codsi ku soo gudbiso codsiga moobilka ee canshuurta My, bogga internetka ee Adeegga Canshuuraha Federaalka ee Ruushka ama mid ka mid ah bangiyada idman. Waxaad cashuurta u bixin kartaa si la mid ah sidii aad isticmaashay markii aad is-diiwaangelinaysay. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad geliso nidaamka macluumaadka ku saabsan dhammaan lacag-bixinta bisha. Marka la gaaro maalinta 12-aad ee bisha xigta, waxaad heli doontaa ogeysiin leh qaddarka canshuurta. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso wax aan ka dambayn 25-ka, waxaad ka xawila kartaa lacag kaarka bangiga codsigayga cashuurta, isticmaal bogga Adeegyada Dawladda ama codsiga bangigaaga.
5. Soo hel macaamiishaada ugu horreeya
Doorashada ugu fudud ayaa ah inaad u sheegto asxaabtaada iyo qoyskaaga adeegaaga ama alaabtaada. Waxaad ku qori kartaa boostada shabakadaha bulshada oo weydiiso inaad la wadaagto. Uma badna in tani ay keento amarro badan, laakiin waxaad tijaabin kartaa sida habraacyadu u dhisan yihiin oo aad heli kartaa jawaab celin. Dareen xor u ah inaad sawirto natiijada shaqadaada, tani waxay kaa caawin doontaa inaad u dhisto faylalka macaamiisha mustaqbalka. Markaa waxaad bilaabi kartaa xayaysiis la beegsaday shabakadaha bulshada iyo xayaysiinta macnaha guud ee matoorada raadinta.
Si tartiib ah ugu gudub aaladaha shaqayn doona mustaqbalka fog. Tusaale ahaan, waxaad ku daabici kartaa qoraallada bloggaaga ama boggaga qolo saddexaad. Isku day inaad ku iibiso goob suuq ah oo ay horeba u joogeen dhagaystayaal badan iyo agabka xayaysiinta ee adiga kuu gaar ah. Way fiicantahay in la tago alaabooyinka laga rabo goobta, dadku waxay arki doonaan dalabkaaga marka ay raadinayaan badeecad la mid ah. Suuq kastaa wuxuu leeyahay shuruudo wax soo saar u gaar ah iyo guddi, akhri tilmaamaha ka hor intaadan saxiixin.
6. Ha ka baqin inaad is sheegto
Qofka ku hammiya ganacsigiisa waxaa laga yaabaa in cabsi badan iyo fikrado badan oo ku saabsan ganacsiga. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ka baqeyso in lagaa tago dakhli la'aan. Qaado fasax shirkadeed ama ka shaqee wakhtigaaga firaaqada si aad u aragto haddii aad ku qanacsan tahay ganacsigaaga cusub. Mararka qaarkoodna waxay kaa cabsi galinaysaa in ay jiraan dalabyo la mid ah suuqa. Laakiin waa khalad inaad u malaynayso inaadan dadka kale ka duwanayn. Qof kastaa wuxuu leeyahay waayo-aragnimo u gaar ah, marka waa muhiim in la fahmo waxa kaa dhigaya mid gaar ah. Ha ka baqin inaad is sheegto, sababtoo ah haddii aadan isku dayin inaad bilowdo ganacsi kuu gaar ah, waxaa laga yaabaa inaad hadhow ka qoomameyso.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 6 tillaabo oo kaa caawinaya inaad lacag ka samayso hiwaayaddaada!